Iintlanzi zikakrebe | Ngeentlanzi
Nangona kunjalo Ookrebe Bezinye zezona ntlobo zoyikekayo ngabantu abaninzi, kukho iintlobo ezingeyongozi kwaye ezinelizwi elithi ukrebe egameni labo. Kungenxa yesi sizathu le nto namhlanje sifuna ukukuxelela malunga neentlanzi ezizolileyo nezinoxolo ezinokuthi ziphelele ekubeni ngabatshutshisi bamanye amaqabane e-aquarium ukuba abaziva bekhululekile xa bekunye nabo. Ndithetha ngokrebe ogqityiweyo obomvu, umzala osondeleyo kakhrekhwe omnyama onomsila obomvu, ofana nalo, naye ovela kwilizwekazi laseAsia.
Los ubomvu obomvu wentlanziBanomzimba obhityileyo, onokufikelela kwiisentimitha ezili-15 ubude, kodwa kukho iimeko apho bafikelele kwiisentimitha ezili-18 ubude. Imibala ihlala iithoni zesilivere, ezimela kakhulu kwii-aquariums, ngakumbi xa sinezityalo kunye namatye kuzo. Ezi zilwanyana ziyasebenza kakhulu ke ngoko kufuneka siqiniseke ukuba itanki leentlanzi esinazo linemilinganiselo ebanzi.
Ukuba ucinga ukuba nezi zilwanyana echibini lakho, kuya kufuneka uyikhumbule loo nto ubushushu bamanzi Kufanele ukuba malunga nama-24 degrees celcius, ukuze bazive bekhululekile kwaye bekhule ngendlela efanelekileyo. Kwangokunjalo, ukutya obanike kona kufanele ukuba kwahluka, bayakuthanda ukutya okuphilayo okufana nemisundululu. Nangona kunjalo, banokutya ukutya okomileyo okuphilayo ngokunjalo.
Ukongeza kwiintlanzi ezibomvu ezenziwe ngookrebe, zikhona nezinye intlanzi yokrebe ezinjenge-angel shark ezingenabundlobongela, zihlasela kuphela xa ziziva zisengozini, kwaye zihlala emazantsi olwandle. Kukho nezinye iintlobo zikakrebe ezinje nge-basking shark ekwabizwa ngokuba yi-sunfish echitha ixesha elininzi kumphezulu ukufumana ukukhanya kwelanga.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Amanzi olwandle » Iintlanzi zikakrebe
Uxinzelelo kwintlanzi: Iimpawu